Long Distance UHF Key Ring, Long Range UHF Key Ring, UHF Key Fobs, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Keychain
RFID လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Key ကို Ring ကို, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Keychain
Keychain 915MHz Keychain, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Keychain, Long Distance UHF Key Ring, Long Range UHF Key Ring, RFID UHF Keychain, UHF Key Fobs, UHF Key Ring, UHF Long Distance Key Ring
chip: EPC GEN2, ဂြိုလ်သား Higgs 3
စံ: ISO18000-6C, EPC-Gen2
မှတ်ဉာဏ်: 96 bits သို့မဟုတ်တိုးချဲ့ 512 bits
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ဟန်းဆက်မှတ်ပုံတင်အကွာအဝေး: 50စင်တီမီတာ
Desktop ကိုစာဖတ်သူအသိအမှတ်ပြုမှုအကွာအဝေး: 1-5M က (စာဖတ်သူကိုလျှောက်လွှာစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် မူတည်.)
အရွယ်：43အသက် 30 × 5mm သို့မဟုတ် 50 × 30 ရက်× 5mm ×, သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -10℃ ~ + 70 ℃
လိုက်လျောညီထွေမြန်နှုန်း: 60km / h
anti-တိုက်မှုယန္တရား: Multi-tag ကိုဖတ်ဘို့
အရောင်ရွေးချယ်မှုများ: ဝါသော, ပြာသော, အနီေရာင်, optional ကို
ပစ္စည်း: ကို ABS shell ကို Ultrasonic ပလတ်စတစ်ဂဟေဆော်ခြင်း
Each RFID key chain generatesaglobally unique ID. ထိုကွောငျ့, it is an ideal solution for automated check-in/check-out procedures in terms of security as it provides an efficient and reliable means of identification.
ထိုကွောငျ့, RFID keychains areasafe and good way to limit access rights. RFID keychains can be selected in different styles and colors, as well as custom LOGO printing and serial number printing.
The appearance of small and exquisite, ကြာရှည်ခံသော, does not fade, water proof, corrosion proof. Can be hung on the keychain, သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသော.
A variety of styles and colors to choose from. Surface printable pattern, ID code, အမှတ်စဉ်နံပါတ်, လိုဂို, စသည်တို့ကို.
အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, bus, ယာဉ်ရပ်နားအများကြီး, ဝိသေသလက္ခဏာစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း, attendance management, လက်မှတ်တွေ, alone card payment, ထုတ်ကုန်ဖော်ထုတ်ခြင်း, စသည်တို့ကို.
I am interested in your product RFID UHF Key Ring, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Keychain
prev: UID Key ကို Chain,0ကဏ္ဍက Can ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး UID Key ကိုလက်စွပ်
နောက်တစ်ခု: T5577 ဟိုတယ် Keychain, T5577 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Keychain, T5557 ဟိုတယ် Key ကို Ring ကို, T5567 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Key ကို Fobs
anti-ကိုယ်ပွား CPU ကို Access ကို Keychain, CPU ကို Chip Anti-ကိုယ်ပွား Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Keychain
Access Control Deviation ကြိမ်နှုန်း Keychain, 250kHz Keychain, 375kHz Keychain, 500kHz Keychain
ID ကို + IC dual-band ကို 4-In-1 Copyable Access ကို Keychain, 125kHz Multi-In-One Access ကိုဓါတ်လှေကား UID ထပ်တလဲလဲဖယ်ပျစ်ထားသည် Code ကို Keychain